Kulabo abane isikhathi eside kakhulu ukukhetha izingubo zakhe, kukhona eyodwa kuphela indlela elungile aphume isimo - thunga it ngokwakho. Ikhumbula ukutholakala kanye nekufinyelela ulwazi yokwehlisa kanye lokuthunga, kanye ahlukahlukene izindwangu nezinsiza emashalofini okukhethekile ezitolo, ungakwazi manje thunga kunoma yimuphi owesifazane kuphela eniyifisela kona. Nokho, kuyafaneleka ukuthi onobuhle amadala yemishini yokuthunga azisebenzi njengoba ngempumelelo njengoba ungathanda. Ixhumeke nge yinkimbinkimbi isebenza nabo, kanye ukulinganiselwa ngokuya ngenani imisebenzi basekela. Bese ngempela ngokwemvelo kuphakama umbuzo kanjani ukukhetha umshini wokuthunga? Unganikeza izincomo ezithile.
Ngaphambi kokuya esitolo, lapho ngokuchichima yemishini yokuthunga Yisimanga, kubalulekile ukunquma okufunayo ukusuka kule yunithi. Kungakhathaliseki ukuthi ubani ekhiqizwa idivayisi, basebenzela osebenzisa isimiso esifana, kodwa umehluko zikhona ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Nokho, Kunezindlela eziningana lemikhiqizo ukuthi kakade wahlonishwa iningi abathengi, ungathembeli ngokuphelele kule isici, kubalulekile ukwenza izinqumo ezinhle, ngoba ukuthenga enjalo ungaphenduki unyaka owodwa.
Izinhlobo yemishini yokuthunga
imishini yesimanje zingahlukaniswa zibe electromechanical, futhi nge-computer lokuthunga efekethisiwe. Uhlobo lokuqala yiyona ezingabizi kakhulu, ngesikhathi esifanayo ulula ngokuya ukuphathwa, njengoba ngokuvamile phambi iphaneli, kukhona izithombe yonke imizila ukuthi bayakwazi ukwenza idivayisi. Ngo amathuba nge-computer kukhona ngobubanzi okuningi, kodwa izindleko lingaphezulu. A lokuthunga efekethisiwe imishini ungenza ngokoqobo konke.
Uma sikhuluma kanjani ukukhetha umshini wokuthunga, kuyafaneleka ukuthi, kulezi kumadivayisi iyona indlela esemqoka ukuthi kungenziwa ngokuphelele ezenziwe metal noma plastic izingxenye kufanele. imikhiqizo yenkampani Janome ungachazwa ukuthi zonke izakhi ze-indlela ekulo eyinsimbi futhi, isibonelo, uMfoweth 'libhekene khona izingxenye ze-non-metallic.
Indlela ukukhetha umshini ezinhle lokuthunga
Kuye ngokuthi yiziphi isethi imisebenzi ohlela baphathe ngedivayisi yakho, kubalulekile ukwenza, futhi leso sinqumo sokugcina, kodwa Kufanele kwaziwe kodwa ukuthi ezinye izimoto ezikufanelayo ezicini zonke, kungase kube ukuzincisha okukhulu. Kukhona futhi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuthi kungaba nethonya elinamandla kukhethwa, isibonelo yokuma Shuttle. ukubekwa ovundlile Kuyinto elula kakhulu, e Kulokhu, bobbin omane esishunyekiwe ngenhla, kanjalo Ukuchusha kuba silula. Ukukhuluma ngendlela ukukhetha umshini wokuthunga, kubalulekile ukuba acabangele sikhathi. Amanye amadivayisi anemisila esakhelwe Ukuthunga Advisor, ngawo ungakhetha version ezifanele kakhulu umsebenzi.
Hlobo luni umshini wokuthunga ukukhetha
Uphenyo onobuhle ezahlukene ukuvumela ukuba uqonde ukuthi yini nokuthi ukuhola emsebenzini. Akumele nje sibheke izici amadivayisi, kodwa nangalokho ukubhala abanikazi abasebenzisa imishini izinyanga ezimbalwa. Packaging imishini incike umenzi kanye nomdayisi nasemsebenzini. Imiyalelo ngokuvamile ecacisiwe wokuthi kumelwe ukuba kukhona ephelele.
Uma sikhuluma kanjani ukukhetha umshini wokuthunga, kufanele kuphawulwe ukuthi ukubonisa okuhle kumadivayisi ezifana engabizi futhi functional, ezifana imikhiqizo adayiswa ngaphansi brand Mfowethu, Janome, Juki. Yiqiniso, ungakhetha yimuphi omunye umenzi, kule une mingcele.
Split-uhlelo air conditioning noma - yikuphi okuphumelela kakhudlwana?
Ukusonta womoya: ukubuyekezwa, Ukucaciswa. Iinsetjenziswa nutrunner womoya
Kungani uzozala umfana ephusheni, futhi yini - nentombazane?